Soo dejisan Twitch 3.1.3 – Vessoft
Soo dejisan Twitch
Dhifasho – software ah aad u aragto video il ka mid ah ciyaaraha kombuyuutarka iyo Console ah. Software The kuu ogolaanayaa inaad si ay u daawadaan gameplay ee kulan caanka ah sida: Minecraft, FIFA, League of Halyeeyo, Dota 2, Counter-garaac, Diablo, Starcraft iwm dhifasho awood u tahay in la helo warbaahin ee ay ciyaarta ama magaca channel iyo isgaadhsiin in chat la users kale halka daawashada video. Software wuxuu bixiyaa tayo sare leh ee images kaas oo hoos loo dhigi karaa si loo badbaadiyo gaadiidka ama si looga hortago in debcinta ee Streaming-ka. Waxa kale oo dhifasho kuu ogolaanaya in aad si aad u xidhid qaddar in channel kaas oo u saamaxaya in ay gab advertising iyo dib u eegto diiwaannada warbaahinta ee la soo dhaafay.
Tayada sare ee image
Dad badan oo kulan la heli karaa si aad u eegto
Search by ciyaarta ama magaca channel ah
Comments on Twitch:
Twitch Software la xiriira: